I-Stylish Varkiza Studio / 5'ukuhamba ukuya elwandle
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguKonstantinos & Eleni
Esi situdiyo esithambileyo, sanamhlanje kwaye sinesitayile, esiseVarkiza 5 'hamba ukusuka eVarkiza Resort Beach, indawo enkulu yolonwabo kwiintsapho kunye nabavunguza bomoya.IVarkiza yindawo ephithizelayo yeSouthern Suburbs ye-Athenean Riviera.Ibekwe kwi-100m ukusuka elwandle. ngaphambili.
Kukho intabalala yokutyela nice kule ndawo, zonke range.I iivenkile ezinkulu, iibhanki kunye nesithuba ekunene ekoneni, cafes nice, imivalo- edume Island Club kunye cinemas moya open.Vouliagmeni Lake ubuncwane bendalo efihliweyo 5 ' qhuba.
I-Studio yi-35m2 yindawo yesicwangciso esivulekileyo esalungiswayo kwiminyaka emibini edlulileyo, kuyilo lwethu.
Sicinga ukuba yenzelwe kakuhle ukuhlala kunye nokuphumla.
Ixhotyiswe ngokupheleleyo ukulungiselela ukutya, ukuphumla kunye nokulala kakuhle ebusuku. Ibhedi yenziwe ngezinto zendalo kunye noomatrasi bakhululekile kakhulu.
Imilinganiselo yebhedi i-1.60 X 2.00cm ifanelekile kwikomityi.Isofa yi-90cm kwaye imithwalo ithambile, ifanelekile ukulala.
Kukho indawo yokupaka ejongene nesakhiwo (iSupermarket's parking) apho unokumisa khona simahla, ngokunjalo nasesitratweni esiphambi kweflethi.
Kukho amanyathelo angama-6-7 ukuya emnyango kwaye istudiyo sibekwe kumgangatho wokuqala (kukho ilifti)
Indawo yokuhlala ibekwe kwindawo ezolileyo kumbindi weVarkiza kwaye yonke into ikumgama omfutshane kakhulu. Umntu, nakweyiphi na iminyaka, uhlala eVarkiza, nangaliphi na ixesha lonyaka, uya kunandipha imvakalelo yakhe yokuhlala ngathi uhlala kwindawo yokuhlala. Isiqithi saseGrisi, kodwa kufutshane neAthene.
Idolophu encinci engaselwandle, enezitiya eziluhlaza kwaye zizele ziintyatyambo, izibuko elincinci (apho unokuthenga khona iintlanzi ezintsha) iindawo zokuhamba, kunye nebala lokudlala labantwana. Kwaye ngaphandle kwe-offcourse ungakhetha ukuba zeziphi (ezininzi) iilwandle ozifunayo, ezinesanti. okanye enamatye (njengeLimanakia) Abanye babo banetikiti lokungena (iVarkiza Resort) kwaye abanye abaninzi basimahla.Kanye unokufumana phantse yonke imidlalo yamanzi.
Ngaphakathi kwemizuzu emi-5 yokuqhuba ngemoto, yiLake iVouliagmeni entle enamanzi ashushu angama-21C ukuya kuma-27C alungele ukuqubha, rhoqo ngexesha lonyaka.
Kufutshane kakhulu nefulethi kukho iindawo zokumisa iibhasi zeGlyfada, iZiko laseAthene, iSounio (iTempile yasePosidon), iPireus.Kwakhona unokuhlola yonke i-Athene Riviera.
Umbuki zindwendwe ngu- Konstantinos & Eleni
Siya kukwamkela, sikubonise iSitudiyo kwaye sikunike lonke ulwazi olufunekayo ukuze uhambe ngokwakho ngokulula kwindawo.
Sihlala kumbindi we-Athens -28km ukuqhuba-kwaye inkundla kwiimeko ezingxamisekileyo silawula ukuba e varkiza ukuba uyasifuna.
Ngexesha lokuhlala kwakho siyavuya ukukunika naluphi na ulwazi okanye uncedo 24/7.
Sihlala kumbindi we-Athens -28km ukuqhuba-kwaye inkund…
UKonstantinos & Eleni yi-Superhost
Inombolo yomthetho: 00001050614
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Vari